Ngwọta ụlọ iji belata ihe mgbu sciatica tupu ọ ghọọ nkwarụ - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Usoro ọgwụgwọ iji belata ihe mgbu sciatica tupu ọ ghọọ nkwarụ - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY	 On June 12, 2021
Anyị na-ekwu maka sciatica mgbe ihe mgbu na-akpata mgbu na-akpata mgbu azụ.. Mpaghara nke na-ezo aka na akwara dị ukwuu na-agba ọsọ site na ala azụ na azụ nke ụkwụ ọ bụla. Mgbe ọ na-enwe nrụgide ma ọ bụ mmerụ ahụ, ihe mgbu na-egbu mmadụ nwere ike ibute ma gbasaa na hip, ụkwụ na aka.
Ewezuga ọgwụgwọ ọgwụ, enwere ọtụtụ nhọrọ okike ị nwere ike ịtụle iji belata ahụ erughị ala a. Chakwasa ihie na sciatica na ndi ozo di iche iji belata ihe mgbu a tupu ya etinyekwu aka na ndụ gị kwa ụbọchị.
Sciatica mgbu nwere ike mechaa kwụsị - Isi mmalite: Bienestar 180
Kedu ihe kpatara sciatica?
Nyocha site na Dr Jennifer Robinson, nchịkọta akụkọ ahụike maka WebMD, ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata mgbu sciatica:
1. A na-eri ya eri
Dị ka dọkịta na-egosi, diski herniated bụ ihe kachasị akpata ngosipụta nke mgbu a na-amaja. Diski dị n'etiti vertebrae nwere ike daa mbà na afọ ma ya mere na-adịkwu mfe gụrụ omume unan. O nwere ike ime na etiti diski gelatinous na-arụ ọrụ na mgbọrọgwụ nke akwara sciatic.
Ọkpụkpụ azụ nwere ike ibelata n'ihi nkụja na akwa nke vertebrae. Mgbọrọgwụ akwara sciatic na-enwe nrụgide n'ihi nkenke a na-akpọ stenosis nke lumbar canal. N’ebe ndị okenye nọ karịa afọ 60, ọkpụkpụ azụ na-adịkarị.
3. Ọkpụkpụ nke spain
Mgbu nwere ike ịpụta site na akpụ etolite na akwara azụ ma ọ bụ akwara sciatic. Akwara ndị na-eduga na eriri afọ na-enwe nrụgide dị ka etuto ahụ. Ihe ndapụta a dị obere.
4. Ọrịa Piriformis
Nke a bụ akwara nke na-esi n'akụkụ pelvic nke sacrum gaa n'elu ọkpụkpụ femoral. Ọkpụkpụ akwara nwere ike ịnọ na nrụgide ma ọ bụrụ na piriformis na-adịkarị ka spasms, nke nwere ike ịkpata mgbu sciatica. Ọ bụkwa a ọnọdụ na-enwekarị mgbagwoju anya na mgbu sciatica na nke na-emetụta ụmụ nwanyị karịa.
Ejiri nkwonkwo nkwonkwo, sacroiliitis bụ ọrịa nke nwere ike imetụta otu ma ọ bụ abụọ nkwonkwo sacroiliac, nke dị na pelvis. Ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe kpatara mgbu na buttocks, ụkwụ ma ọ bụ obere azụ. Ọnọdụ a nwere ike ịbụ kpatara mmerụ ahụ, afọ ime, ọrịa, ma ọ bụ ọrịa ogbu na nkwonkwo. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe mgbu nke nwere ike ịka njọ mgbe ị na-eguzo ogologo oge ma ọ bụ ọ bụrụ na ị gbagoo arịgo.
6. Ihe mmerụ ahụ ma ọ bụ ọrịa
Enwere ike imebi akwara sciatic ma ọ bụ jikọọ ya site na mbufụt, mmerụ ahụ, ma ọ bụ ọrịa. Nsogbu ndị nwere ike ime dịka ọmụmaatụ n'oge mgbaji, nke ga-akpata mgbaàmà nke sciatica.
Enwere ike ịchọta ihe mgbu Sciatica na apata ụkwụ na ụkwụ ya - Isi mmalite: Bienestar 180
Kedu ka ị si amata ihe mgbaàmà nke sciatica?
Sciatica mgbu nwere ike ịbụ ihe na-enye nsogbu karị n'ihi na ọ nwere ike ịmalite site na nhazi kwa ụbọchị dị ka ịnọdụ ala ogologo oge, ịchị ọchị, ụkwara ma ọ bụ izu. Enwere ike igosipụta ọnọdụ ahụ site na ngbu dị nro ma ọ bụ site na ihe na-akpali akpali nke tingling na ọkụ. Na mgbakwunye, onye ahụ metụtara nwere ike ịnwe adịghị ike ahụ ike, mgbu ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ. Ọtụtụ mgbe, mgbu nke na-amalite na buttock ma ọ bụ ala azụ gbatịrị apata ụkwụ, nwa ehi na ụkwụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe mgbu sciatica ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na mgbu azụ nke na-esitekarị na nnukwu esemokwu na akwara nke azụ azụ. Iji chọpụta ihe mgbu sciatica, ọ nwere ike ịdị ka mpempe akwụkwọ nke nwere ike ịnwụ ụbọchị ole na ole.
Kedu ka esi amata ya?
N'oge nlekọta ahụ ike, dọkịta ga-ajụ onye ọrịa ahụ ajụjụ ụfọdụ iji mata nsogbu ya. Ọ ga - esi otú a chọpụta ihe mgbu, ịjụ banyere ọnọdụ dị na mmalite ha na ịchọpụta ihe nwere ike njọ ma ọ bụ mezie ọnọdụ onye ọrịa ahụ. Mgbe ahụ, ọ ga-abụ ajụjụ nke chọpụta mpaghara mgbu mbụ yana ụzọ ya site na nyocha ahụike.
Akwụkwọ, ị ga, pepụ .. ka esi eji akụkụ "abaghị uru ..."
Aghụghọ okike iji nwee nku anya buru ibu ...
Otu esi agbatị ndụ varnish site na isoro usoro 7 ...
Ọ bụrụ na a na-enyo enyo ma ọ bụ ọrịa, nyocha (CT, X-ray ma ọ bụ MRI) nwere ike ịba uru dị ka egosiri na Prọfesọ Aleth Perdriger, onyeisi ngalaba na-ahụ maka ọrịa na-efe efe na Rennes University Hospital.
3 ogwu ogwu iji belata ihe mgbu sciatica
Usoro ọgwụgwọ ndị a nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ihe mgbu ndị a. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdị irè, buru n'uche na ha ekwesịghị ịgbanwe nnọchi dọkịta gị.
Ezigbo mmanu - Isi mmalite: Top Santé
1. Ngwọta mmanụ dị mkpa
Mmanụ ndị a nwere ihe nwere ike igbochi mgbu na mbufụt. Ha nwere ike ịbụ ezigbo kwadoro megide mgbu sciatica dị ka Isabelle Pacchioni, ọkachamara na aromatherapy. Iji kwadebe usoro ọgwụgwọ a, ị ga - achọ:
10 tụlee nke arnica mmanụ ihe oriri
2 tụlee nke rosemary camphor mkpa mmanụ
2 tụlee nke mmanụ dị mkpa site na ịgha ụgha wintergreen
Nwere ike iji ngwakọta mmanụ a na ịhịa aka n'ahụ ogologo oge 3 ugboro n'ụbọchị.
St John Wort herbal tea - Isi mmalite: Ooreka
2. Tee nke Osisi John Wort
St John's Wort ga-abụkwa ụzọ ọzọ dị irè ma ọ bụrụhaala na ọ naghị egbochi ọgwụgwọ ọgwụ nwere ike ịdị. Dabere na Thierry thévenin, organic herbalist producer nke ọgwụ ọgwụ, ọ ga-ekwe omume belata sciatica site na ịgwakọta St John Wort na tii na-agba ịnyịnya. Agbanyeghị, ọ ga-adị mma ma ị chọọ ndụmọdụ dọkịta gị. Dibia ogwu na-ekwusi ike na odi mkpa inyocha tupu oge eruo ma ogwu herbal na usoro ogwu you are na-adabako.
3. Ihe ịsa ahụ na-ebelata ihe mgbu
Ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka mgbu akwara - Isi mmalite: Ooreka
Dị ọgwụgwọ ọzọ sitere n'okike dịka ịsa ahụ mgbu nwere ike ịdị irè dị ka ahịhịa. Isabelle Pacchioni na-akọwa otu esi aga n'ihu kwadebe ihe mgbu na-ebelata bat na mkpa mmanụ nke osisi junipa. Will ga - achọ:
10 tụlee nke junipa mmanụ dị mkpa
1 tablespoon nke mmiri na-anọpụ iche
Wunye mmanụ dị mkpa n'ime isi na-anọpụ iche wee jikọta ya na mmiri ịsa ahụ. Nọgide na tub ahụ ma ọ dịkarịa ala minit 20 iji nweta uru nke ọgwụgwọ a.
Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ maka sciatica
Enwere obere ihe ngosi sayensi na-egosi ịdị irè nke ọgwụ ọzọ na-agwọ ọrịa ahụ. Otú ọ dị, ụzọ ụfọdụ nwere ike inyere aka belata yagụnyere yoga, mmega ahụ dị nro, mkpakọ ọkụ na oyi, wdg. Fọdụ Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ nwekwara ike inye aka mee ka ihe mgbu dị na sciatica pụta. Otu n'ime ndị kasị dị irè bụ:
a ọmụmụ bipụtara na Journal of Chinese Omenala na-egosi na enwere ike belata mgbaàmà nke sciatica na acupuncture, ọgwụ ọdịnala nke ndị China. Karịsịa, ndị nchọpụta ahụ mere ka mmelite dị na nhụjuanya mgbu na mgbaàmà ahụike.
Ọhịa ịhịa aka
Dị ka otu ọmụmụ jiri obi umeala bipụtara na 2008, ịhịa aka n'akụkụ ụfọdụ ga - enyere aka melite mmegharị ma belata ihe mgbu. Usoro ọgwụgwọ a nke etinyechara nnọkọ ya na mpaghara pelvis, apata ụkwụ, ụkwụ na obere azụ ga, dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, enyemaka bara uru iji belata ahụ erughị ala nke sciatica.
Kpachara anya: Ejighi ọgwụ ndị a iji dochie ndụmọdụ nke dọkịta gị. Na-agakwuru onye ọkachamara ahụike tupu ị na-eji usoro okike.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/remedes-naturels-pour-soulager-la-douleur-scialis-avant-quelle-ne-devienne-invalidante/
TELES RELAY 56305 posts 1 comments
Mmekọahụ na Obodo Premier - Video
Noticias Telemundo 6:30 pm, 16 de abril de 2021 | Noticias Telemundo - Video
Usoro aghụghọ iji nwee nku anya buru ibu karịa - SANTE…
Otu esi agbatị ndụ varnish site na isoro usoro 7 - SANTE PLUS…
Nke a bụ ihe dị iche n'etiti nkụchi obi, nkụchi obi na ihe mberede ...